Bulshada Samoa (Seattle) - HistoryLink.org
Bulshada Samoa (Seattle)
Mawjaddii ugu horaysay ee muhaajiriinta Samoa waxay soo galeen Seattle ka dib Dagaalkii II ee Adduunka. Qaar badan oo soo galooti cusubi waxay ka shaqeeyeen saldhigga ciidanka badda ee Pago Pago, caasimadda Samoa-da Maraykanka, taasoo xidhantay dhammaadkii dagaalka. Markii dambe muhaajiriintu waxay ku biireen xubno qoys oo sii deggenaa si ay u helaan tacliin fiican iyo fursado shaqo oo fiican. Muhaajiriintii hore ee gobolku waxay aasaaseen kaniisato, inta badan qoysas ku abtirsada, kaasoo siiya taageero siina wada dhaqanka bulshada koraysa. U dhaqdhaqaaqayaasha iyo hoggaamiyeyaasha Samoa waxay abuureen barnaamijyo iyo xarumo bulsho si loogu sharfo looguna xafido dhaqanka Samoa iyo si loola dagaalamo arrimaha socda ee shaqo la’aanta, faqriga, dambiga, iyo ka hadhista saraysa ee tacliinta dhalinta Samoa, oo ay qaybka tahay tababar la’aan luuqadda Ingiriisiga ee kuwa ku hadla Samoa. Xarunta Samoa ee Seattle iyo Xoogga Tacliinta Samoa waxa la aasaasay labadaba 1970dii, waxana la sameeyey cutubka Ururka Waalidka Macalinka Ardayga ee Samoa iyo Pacific Islanders-ka 2000. Bulshadu waxay siisaa abaal gud ciyaartooygeeda aadbayna u soo baxdaa si ay u taageerto Kooxda Kirikitka. 1993 “Aso Mo Samoa” ama Maalinta Bulshada Samoa ee u horeeysay ayay ugu dabaaldegeen dhaqanka Samoa qoobka-ciyaar dhaqameed, heesid, cuntada jasiiradda, caadooyin iyo xaflad dhaqameed, iyo ciyaaro kirikit. Bulshadan bogasashada og dareenka xooganna lihi waxay ka badbaaday dayac kaga yimi dawladda hoose iyo khilaaf gudeed ka soo saartay koonfurta Seattle iyo galbeedka seattle bulshada qoomiyad ruxmaysa. Sannadkii 2000 qiyaastii 8,000 oo Samoa Maraykankan ah ayaa ku noolaa gobolka Washington, 80 boqolkiiba waxay deggenaayeen degmooyinka King iyo Pierce.